Grevlunda, imbonakalo yolwandle e Österlen - I-Airbnb
Grevlunda, imbonakalo yolwandle e Österlen
Vitaby, Skåne län, Sweden
Indlu entle enombono wepanoramic phezu kolwandle nasemaphandleni
Eli khaya liqaqambileyo, lihle leholide e-Grevlunda likwindawo enenduli enika umbono oqaqambileyo wamaphandle. Indlu yayiyilwe ngumyili wezakhiwo kwaye ineefestile ezinkulu, i-terrace kunye ne-conservatory ekhanyayo. Unethuba lokunandipha ukuhlala okumangalisayo kweli lizwe. Yiba nesidlo sakusasa sakho phantsi kokukhanya kwelanga kwasekuseni kwenye yezi ndawo zimbini, nanini na imozulu ivuma.
I-Österlen idume ngobume bayo obuhle ngamava amaninzi amnandi kubumelwane beli khaya leeholide. Iilwandle ezintle, iikhefi, iivenkile zasefama kunye neegalari zilapha. Kukwakho neendawo zokutyela kunye nembali yenkcubeko etyebileyo. Ndwendwela iNqaba egcinwe kakuhle, yamaxesha aphakathi eGlimmingehus. EHaväng kunye nasemangcwabeni kunye needolmens zaseKivik naseHaväng, yonwabele i-ambience yexesha elidlulileyo. Ungaphoswa kuphonononga iintsomi uAles Stenar kufutshane neKåserge. Ipaki yeSizwe yaseStenshuvud kunye neChristinehof Eco Park zikufuphi.
Yiva indalo kwenye yeendlela ezininzi zokuhamba intaba. IHaväng kunye neRörum Beach kunye neSandhammaren zineelwandle ezidumileyo. Kwakhona zidumileyo kwiilali zokuloba ezipholileyo zaseVitemölla, eKivik, eBrantevik naseSkillinge. Ungathenga eSimrishamn kunye nedolophu yaseTudor-yendlu yaseYstad. Yonwabela usuku olungalibalekiyo ngokudibana kunye kwithafa kunye nokonwabela umbono wokutshona kwelanga emva kwemithi.
Malunga nekhaya leholide
• Izinto zokwakha: Ilitye
• Imbonakalo yePanorama phezu kwamanzi
• Izilwanyana zasekhaya: 0
• Ngaphandle kokungena kwigumbi lokulala: ii-2 pcs
• Irentiswa kuphela iindawo zeeholide
• Yakha (unyaka): 2012
• Umgangatho wethu wokulinganisa: 4
• Iindwendwe: 8
• Inkqubo yeHi-Fi/isidlali seCD
• 2 abadlali DVD
• I-intanethi engenazingcingo
• Imali yesitulo somntwana: 1
• Isixa sebhedi: 1
• Ikhitshi: Amanzi ashushu nabandayo
• Inombolo yegumbi lokuhlambela. 1
o WC: Amanzi ashushu nabandayo, Ishawa
• Inombolo yegumbi lokuhlambela. 2
• Inombolo yegumbi lokulala. 1
o King Ubukhulu Ibhedi (2 izithuba)
• Inombolo yegumbi lokulala. 2
o Ibhedi enye
• Inombolo yegumbi lokulala. 3
o Ubukhulu bukaKumkanikazi
• Inombolo yegumbi lokulala. 4 Ubukhulu bukaKumkanikazi
• Igumbi lokulala elingu-5
• Indawo yokugcina ubushushu
• Ikhitshi/igumbi lokuhlala
• Ihood yokupheka
• Umkhenkce onzulu: 60 l
• Umdidi wekofu
•	Imeshini yovasa Impahla
•	Isihlambi zitya
•	Ivacuum yococa
Ukufudumeza / Amandla
• Unyaka wonke ugqunyiwe
• Ukufudumeza nge-geothermal
• Ukufudumeza umgangatho kuwo wonke
• Isitovu sokutshisa iinkuni
• Ukusebenzisa iinkuni simahla
• Indawo yendalo/Igadi: 2000 m2
• Ifenitshala yasegadini
• Indawo yokupaka yasimahla kwisiza: indawo yokupaka e-1
• Iterrace okanye efanayo
o Ithala elivulekileyo
• Ibala legalufa: 10 km
• Iindlela zokuhamba eziphawulweyo: 5 km
• Umgama kwisikhululo seenqwelomoya: KID: 38 km
• Indawo yokuhlala ekufutshane: 200 m
• Ithuba lokuloba umgama: 5 km
• Ukuthenga umgama: 5 km
• Indawo yokutyela ekufutshane: 5 km
• Isixeko esikufutshane: 18 km (Simrishamn)
• Amanzi akude: 5 km (ulwandle/unxweme olunesanti)
• Nceda uqaphele ukuba le migama ingentla iqikelelweyo, kwaye ikwimigca ethe ngqo ukusuka kumabala epropathi.
Ukucocwa kokugqibelaPer ukuhlala 165.00 EUR
IGrevlunda ikwiOsterlen entle kunye neenduli kufutshane nolwandle lweBaltic
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vitaby